» मिस वर्ल्डमा ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्ड जित्ने ३ मिस नेपालहरु (भिडियो)
मिस वर्ल्डमा ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्ड जित्ने ३ मिस नेपालहरु (भिडियो)
३ पुष २०७६, बिहीबार ११:११
मकवानपुर, ०३ पुस । मिस वर्ल्डमा मिस नेपालहरुले विभिन्न समयमा तहल्का मच्चाएका छन् । सन् २०१९ सम्म आईपुग्दा नेपालकी सुन्दरीहरुले आफुलाई मिस वर्ल्डको हकदारका रुपमा समेत स्थापित गरिसकेका छन् । सन् २००१ देखि अहिलेसम्म १९ जना प्रतियोगीहरुले ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्ड जितेका छन् । यी १९ प्रतियोगीहरुमध्ये ३ जना मिस नेपालले यस च्यालेञ्जमा जित हासिल गरेका छन् । मिस नेपाल ईशानी श्रेष्ठले सन् २०१३ मा, मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले सन् २०१८ मा र हालसालै मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठले सन् २०१९ मा ब्युउटी उईथ अ पर्पोज अवार्ड जितेकी हुन् । यस भिडियो सामग्रीमा यी तिनै जना मिस नेपाल, उनीहरुको त्यस बेलाको सफलता र उनीहरुको प्रोजेक्टको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ ।
१) इशानी श्रेष्ठ, मिस नेपाल वर्ल्ड २०१३–मिस वर्ल्डमा ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्ड जित्ने पहिलो मिस नेपाल हुन् ईशानी श्रेष्ठ । मिस नेपाल वर्ल्ड २०१३ की विजेता ईशानीले उक्त समयमा ईण्डोनेसियामा भएको मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्ड जितेकी थिईन् । इशानीलाई उत्कृष्ट भिडियो प्रस्तुति र सामाजिक कार्यका लागि ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । उनले ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्डका लागि ‘प्रोजेक्ट स्माईल’ नामक प्रोजेक्ट तयार पारेकी थिईन् । जसमा उनले नेपालको ग्रामिण भेगमा मौखिक स्वास्थ्य अर्थात दाँत र मुखसम्बन्धी स्वच्छताको अभियानलाई प्रमुख स्थान दिएकी थिईन् । इशानी मिस वर्लल्डमा नृत्य प्रस्तुत गर्न पाउने ११ सुन्दरीहरुमध्येकी एक थिईन् । उनले त्यस समयमा माईतीघर बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् । साथै उनी त्यस समयमा मिस वर्ल्डको सेमिफाईनल अर्थात उत्कृष्ट १० मा परेकी थिईन् । उनले प्राप्त गरेको स्कोरका आधारमा उनी उत्कृष्ट १० को पाँचौ नम्बरमा थिईन् । उनले २ सय ९० नम्बर प्राप्त गरेकी थिईन् । मल्टिमिडिया अवार्डको सेकेण्ड रनर अप समेत भएकी ईशानीले मिस वर्ल्ड २०१३ का अन्य विभिन्न सबटाईटलमा पनि फाईनलसम्मको यात्रा तय गरेकी थिईन् । सन् २०१३ मा मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा भाग लिँदा उनी २२ वर्षकी थिईन् । काठमाडौँमा जन्मिएकी इशानी उक्त समयमा डेन्टिष्ट विद्यार्थीका रुपमा थर्ड ईयरमा अध्ययनरत थिईन् । नेपाली, हिन्दी, नेवारी, अंग्रेजी र स्पेनिस भाषामा दक्षता भएकी इशानीले त्यस समयमा नै विभिन्न नेपाली चलचित्रहरुमा अभिनय समेत गरिसकेकी थिईन् । २ वर्षको उमेरमा नै विज्ञापनमा अभिनय गरेर मोडलिङ सुरु गरेकी इशानी त्यसै समयमा डब्लुडब्लुएफकी एम्बासेडर समेत थिईन् । उनी ५.८ इञ्च अग्ली छिन् ।
२) श्रृङ्खला खतिवडा, मिस नेपाल वर्ल्ड २०१८–मिस वर्ल्डमा ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्ड जित्ने दोस्रो मिस नेपाल हुन् श्रृङ्खला खतिवडा । मिस नेपाल वर्ल्ड २०१८ की विजेता श्रृङ्खलाले मिस वर्ल्ड २०१८ मा तहल्का मच्चाएकी थिईन् । उनले पहिलो पटक मिस वर्ल्डतर्फ नेपाली युवाहरु र आम जनमानसको ध्यान केन्द्रित गर्दै ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्ड जितेकी थिईन् । उनले ब्युउटी उथ अ पर्पोजका लागि मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने प्रोजेक्ट निर्माण गरेकी थिईन् । कैलाशसम्म पुग्न बाटो समेत नभएको अवस्थामा विशेष गरी चेपाङ समुदायका लागि उनले आफैले डिजाईन् गरेर स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेकी थिईन् । उनले त्यहाँसम्म पुग्नकालागि उनले सहयोगी निकायसँग मिलेर सडक समेत निर्माण गरेकी थिईन् । विभिन्न माध्यमबाट चन्दा संकलन गरेर उनले स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरेकी थिईन् । साथै पहिलो पटक उनले उक्त ग्रामिण क्षेत्रमा डाक्टरको टोली सहित स्वास्थ्य शिविर राखेकी थिईन् । श्रृङ्खलाले मिस वर्ल्ड २०१८ मा हेड टु हेड च्यालेञ्जको पहिलो राउण्ड जित्नुका साथै मल्टिमिडिया अवार्ड समेत जितिन् । उनले मिस वर्ल्डको वेबसाईट मार्फत त्यस समयमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भोट प्राप्त गरेकी थिईन् । साथै उनले सान्या टुरिजम भिडियो अवार्डमा समेत सेकेण्ड रनर अप हुन सफल भएकी थिईन् । उनी मिस वर्ल्डको उत्कृष्ट १२ सम्म पुग्न सफल भएकी थिईन् । उनी मिस फ्यासिनोकी विजेता र टप मोडलमा उत्कृष्ट ३२ सम्म पुग्न सफल भएकी थिईन् । श्रृङ्खला खतिवडा वि.सं. २०५२ साल कार्तिक १७ गते मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा जन्मिएकी हुन् । आर्किटेक्चरमा ब्याचलर गरेकी उनी कलेज टपर विद्यार्थी समेत हुन् । ५ फिट ६ ईन्च उचाई भएकी उनी मिस वर्ल्डमा भाग लिँदा २२ वर्षकी थिईन् । उनी वान होम फाउण्डेसनकी निर्देशक समेत हुन् ।
३) अनुष्का श्रेष्ठ, मिस नेपाल वर्ल्ड २०१९–मिस वर्ल्डमा ब्युउटी विथ अ पर्पोज अवार्ड जित्ने तेस्रो मिस नेपाल हुन् अनुष्का श्रेष्ठ । मिस नेपाल वर्ल्ड २०१९ की विजेता अनुष्काले मिस वर्ल्डमै ३ वटा अवार्ड जितेर रेकर्ड समेत राखेकी छिन् । उत्कृष्ट १२ अर्थात सेमिफाईनलसम्म पुगेकी उनले हेड टु हेड च्यालेञ्ज, मल्टिमिडिया अवार्ड र ब्युउटी विथ अ पर्पोज गरी ३ वटा अवार्ड जितेकी हुन् । उनले हेड टु हेड च्यालेञ्जको फाईनलमा मिस ईण्डोनेसिया प्रिन्सेस मेगेनेण्डोलाई पछि पार्दै जित हासिल गरेकी थिईन् । त्यस्तै मल्टिमिडिया अवार्ड जित्न उनले मोबस्टार एपमार्फत १७ मिलियनभन्दा बढी लाईक र ३० हजारभन्दा बढी फलोअरहरु प्राप्त गरेकी थिईन् । उनका सामाजिक संजालका पोष्टहरुमा लाखौँ कमेन्टहरु गरिएका थिए । उनले मिस वर्ल्डको वेबसाईटमार्फत १५.०६ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेकी थिईन् । मिस नेपालको अफिसियल फेसबुक पेजलाई ७ लाख ४१ हजार ७ सय ६७ जनाले लाईक गरेका थिए भने उनको ईन्ष्टाग्राम एकाउन्टमा एक लाख १७ हजारले उनलाई फलो गरेका थिए । साथै बिउटी उईथ अ पर्पोजको उत्कृष्ट १० मा परेका सबैलाई पराजित गर्दै उनले जीत हासिल गरेकी थिईन् ।
अनुष्काले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सोल्सिङ गाउँको सामुदायिक उत्थानको मोडललाई केन्द्र बनाएर ब्युटी उईथ अ पर्पोजको तयारी गरेकी छिन् । त्यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकको संघर्ष अनि राजधानीबाट केबल ७० किलोमिटर टाढा भएर पनि त्यहाँका समुदायले भोग्नुपरेका पिडालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य उनले आफ्नो प्रोजेक्टमा समावेश गरेकी छिन् । उक्त समुदायमा हरेक परिवारबाट कम्तिमा पनि आमा र बच्चा दुई जनालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने प्रोजेक्ट तयार उनको रहेको छ । उनले उक्त महत्वकांक्षी योजनाको लागि निकै कसरत समेत गरेकी छिन् । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बसेर फाईनान्सियल सर्भिस गरिरहेकी अनुष्काले गत बैशाखमा मिस नेपाल वर्ल्ड २०१९ को ताज जितेकी थिईन् । २३ वर्षीया अनुष्का श्रेष्ठ मिस ओसियाना नेपाल २०१८ की विजेता समेत हुन् । ५.५ ईञ्च अग्ली अनुष्काले व्यवस्थापनमा स्नातक उतिर्ण गरेकी छिन् । मिस नेपाल अनुष्कालाई नेपालीका अलावा हिन्दी र अंग्रेजी भाषाको समेत राम्रो ज्ञान छ । उनी चित्रकलामा समेत पोख्त छिन् । आदरणीय दर्शविन्द तपाईलाई यी ३ मिस नेपालहरुको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।